Le Compostelle, T3 chic, charm, intuthuzelo 73 m²
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguSylvie
Ukufikelela simahla kwibhokisi yesitshixo, ukuzimela ngokupheleleyo ngokungena ngokuzimeleyo, iholo elikhuselekileyo. Igumbi elizolileyo neliqaqambileyo elinempahla ye-73 m², umgangatho ophezulu wendlu yabucala enamagumbi ama-2, embindini wesixeko saseSt Léonard de Noblat, yonke intuthuzelo, i-cocooning iqinisekisiwe!
Igumbi lokuhlala elinebhedi yesofa, i-134 cm yeTV, amagumbi okulala ama-2 aneewadi, idesika.
Ilinen inikezelwe. Igumbi lokuhlambela. Iitawuli zinikezelwe. i-WC.
Ikhitshi elifakwe kunye nezixhobo.
Umamkeli okhoyo, i-Concierge ngesicelo esongezelelweyo.
Le yokuhlala eqaqambileyo linikeza nekhitshi afakelwe ifakwe eziko, Isitovu, microwave, isikhenkcezisi kunye njengesicocisi, igumbi abaphila ne esililini isofa kunye ezinkulu 134 cm flat screen, nxazonke, 2 okulala amakhulu iikhabhathi, indawo ofisi, lokuhlambela. Lokuhlambela kunye yokuhlamba machine kunye isomisi, i-wc eyahlukileyo, isebenzayo, ikhanya kwaye ikhululekile, imbono yegadi ngasemva, imbono yeCawe yaseCollegiate ngaphambili, umtsalane wakudala, induduzo yesimanjemanje, utshintsho lweendawo eziqinisekisiweyo.
Nayiphi na intuthuzelo, ilinen ebonelelweyo. I-WIFI yasimahla.
Ezinye iinkonzo ezifumanekayo xa uzicelile.
4.98 · Izimvo eziyi-102
ISt Léonard de Noblat, idolophu yamaxesha aphakathi egcwele ngabalinganiswa, ikwiChemin de St Jacques de Compostelle. Unazo zonke iinkonzo ezinokuthi: Ukupaka kufutshane, ukufikelela ngokukhawuleza kwiivenkile, kubandakanya abatya, iibhaka, iikhemesti, iindawo zokutyela, oogqirha, iibhanki ...
Kodwa kwakhona, ezinye izinto eziyimfuneko
Icawa yeCollegiate yaseSt Léonard de Noblat.
IMyuziyam yePhepha eliDala iLe Moulin du Got
Gay Lussac Museum
Ichibi lokudada leAquaNoblat lamanzi
Ikhosi yezemidlalo, kunye neendlela zokuhamba
Amachibi olonwabo, ukuloba kunye nokuqubha.
Ufikelelo lwasimahla ! Ukufika kunye nokuhamba ngexesha lakho lokuphumla, ibhokisi engundoqo enekhowudi ekungeneni kwesakhiwo. Hlala kwinkululeko epheleleyo. Unako, kwaye ulindele ukukwamkela, kwaye unikeze ukuhlala okona kumnandi.
Ufikelelo lwasimahla ! Ukufika kunye nokuhamba ngexesha lakho lokuphumla, ibhokisi engundoqo enekhowudi ekungeneni kwesakhiwo. Hlala kwinkululeko epheleleyo. Unako, kwaye ulindele…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-Léonard-de-Noblat